गोपीकृष्ण मुभिजको रोजीको छायाँकन शुरु, प्रदीप खड्का हत्यारा करार ! | Rajmarga
गोपीकृष्ण मुभिजको रोजीको छायाँकन शुरु, प्रदीप खड्का हत्यारा करार !
चलचित्र रोजी निर्माण शुरु भएको छ । गोपीकृष्ण मुभिजका लागि उद्धव पौड्यालको प्रस्तुती रहने चलचित्रको बुधबार बालाजुस्थीत नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी एनएफडिसीमा शुभ मुर्हत सम्पन्न भएको छ ।
जहाँ चलचित्रका मुख्य पात्र प्रदीप खड्का लामो कपाल, दाह्री पाले र हातमा हद्कडी लगाएर अदालतको कठघरामा उपस्थीत भए । जसलाई आफ्नै प्रेमिका रोजी राणाको हत्या गरेको आरोप लागेको छ । अदालतमा न्यायाधिसका रुपमा वरिष्ठ चलचित्रकर्मी उद्धव पौड्याल थिए भने अभिनेत्रीद्धय पारमिता राज्यलक्ष्मी शाह र मिरुना मगर पनि ।
Previous post: उच्च रक्तचाप: जानकारी राख्नुपर्ने केही तथ्य
Next post: किन भाउ खोज्दै छन त मायामा मोडल करिष्मा र आरुषि ? (भिडियोसहित)
विदेशिनुको पीडा ‘जालमा फसायौ’ मा
यस्तो छ, “हावाको झोका” (भिडियो सहित)
बिबि गुरुङको ‘फूल जस्तै’ गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)
प्रेम गित ३ मा अञ्जली फाइनल? एसएलसीपछि घरबाट भागेकी थिइन अञ्जली
‘प्रेम गीत ३’ हिरोइन् क्रिष्टिना : आफ्नो तर्फबाट शत प्रतिशत दिनेछु
‘चपली हाइट ३’ बन्ने, अभिनेत्रीमा स्वस्तिमा खड्का